दिल्लीबाट फर्काइएका चेली भन्छन्- विदेश जान पाऔं ! - Prawas Khabar
‘नेपालबाटै जान दिएको भए लुकीलुकी दिल्ली पुग्नुपर्ने थिएन’
१६ साउन, काठमाडौं । दिल्लीबाट उद्धार गरेर मंगलबार काठमाडौं ल्याइएका १६ जना नेपाली चेलीहरुको बेदना अलि बग्लै पाइयो ।
दुबई लैजाने भन्दै दलालमार्फत दिल्ली पुर्‍याइएका कतिपय चेलीहरु नेपाल फर्काइएकोमा खुशी देखिएनन् । उनीहरुको चाहना रहेछ- काठमाडौंबाटै दुबई जान पाइयोस् ।
आखिर के भन्छन् त उद्धार गरिएका नेपाली चेलीहरु ? हामीले उनीहरुको कथा-व्यथा खोतल्ने प्रयास गरेका छौं-
डडेलधुराकी सपना थापाको विवाह भएको १३ वर्ष भयो । कक्षा १२ मा पढ्दा-पढ्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनको त्यसपछि पढाइले निरन्तरता पाउन सकेन । विवाहपछिको समय घरधन्दामै बित्यो ।
अहिले सपनाका ११ वषर्ीय छोरा कक्षा ६ मा पढ्छन् । आर्थिक अभावले गर्दा छोराको विद्यालय शुल्क तिर्न धौधौ परेपछि उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा कमाउने सपना देख्न थालिन् ।
सात महिना पहिले दुबई गएकी बहिनीले ‘यहाँ काम राम्रो छ दिदी’ भनेपछि आफ्नो हिम्मत बढेको उनी बताउँछिन् । र, विदेश पुर्‍याउने व्यक्तिको खोजी पनि बहिनीले नै गरिदिइन् ।
सम्पर्क व्यक्तिले एक लाख पचास हजार रुपैयाँ दिए दुबई पुर्‍याउने आश्वासन सपनालाई दिए । त्यसमध्ये ५० हजार माइतीसँग मागेर उनले बुझाई पनि सकिकेकी छन् ।
मासिक १५ सय दिराम पाउने प्रलोभन देखाएपछि उनी असार तेस्रो साता डडेलधुराबाट कृष्णनगर हुँदै नयाँ दिल्ली पुगिन् ।
तर, सपनाको सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो, जतिबेला उनीसहित १६ नेपाली महिलालाई दिल्ली महिला आयोगको नेतृत्वमा भारतीय प्रहरीले उद्धार गर्‍यो । मंगलबार काठमाडौं आइपुगेकी सपना विदेश जान नपाएपछि घर न घाटको भएको उनले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
विदेश जानुको भित्री कारण खोल्दै सपनाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘श्रीमान र सासूको हेपाहा व्यवहारले गर्दा पनि विदेश जान लागेकी थिएँ ।’ कमाइ गर्ने छोरी र धेरै कमाउने बुहारीलाई मात्रै काखी च्याप्ने चलनले पनि उनलाई विदेशिन बाध्य सुनाइन् ।
‘दिदी पनि त्यही बाटो भएर जानु भएकाले विश्वास लागेर दिल्ली हुँदै जान लागेकी थिएँ’, सहना भन्छिन् ।
उनको पनि विदेश जान लाग्नुको आफ्नै कथा रहेछ ।
अनलाइनखबरलाई आफ्नो अनुभव बताइरहँदा उनले आँशु खसालिन् ।
समाचारकै कारण आफूहरू काठमाडौंमा पनि बाहिर निस्कन नसकिरहेको सकलाको भनाइ छ ।
कोरियाले २०१९ मा ५६ हजार कामदार भित्र्याउने, सबैभन्दा बढी नेपालबाट
रुन पनि सक्दैनन् मर्दै गरेका सन्तान, टुलुटुलु हेर्न बाध्य अभिभावक
अनलाइन सपिङ बजार’ शुरु, अर्डर गरेको डेढ घण्टामा सामान घरमै